Golden Princess na-abanye na akọrọ maka mgbanwe dị egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Golden Princess na-abanye na akọrọ maka mgbanwe dị egwu
Dika Golden Princess bidoro ihe ndi nwebugoro nke ndi ulo oru a, Princess Cruises na-akpo ndi ozo oku ka ha soro oganihu site na mmelite Twitter nke gha egosi kwa ubochi.
Dika Golden Princess bidoro ihe kachasi nma nke ndi ulo oru mere, Princess Cruises na-akpo ndi ozo oku ka ha soro oganihu site na mmelite Twitter nke gha egosiputa akwukwo foto nke ubochi nke mgbanwe nke ugbo agha. Nke mbụ maka Princess, ihe ntanetị ga-akọwa mgbanwe ndị dị egwu n'ime ụgbọ ahụ n'oge ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu atọ na Victoria Shipyards na British Columbia.
Akwụkwọ akụkọ ahụ amalitela na www.princess.com/goldendrydock ma ga-aga n'ihu na May 5, mgbe ụgbọ mmiri ahụ ga-ebugharị ọzọ yana atụmatụ ọhụrụ ya, gụnyere ụdị atrium Piazza ọhụrụ, ndị toro eto naanị ebe nsọ, ihe nkiri n'okpuru Stars nkiri ihuenyo, a ọhụrụ okpueze imi anụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ seụ, na a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ nkwalite.
Ndị ọrụ Twitter ga-enweta "tweet" kwa ụbọchị banyere ọganihu na-ewu ọhụụ mgbe ha gbasoro usoro ntinye aka dị mfe ma họrọ ịgbaso Princess na http://twitter.com/PrincessCruises.
Jan Swartz, Princess Cruises onye isi osote onye isi oche kwuru, "Anyị maara na enwere mmasị dị ukwuu na mgbanwe ụgbọ mmiri dịka nke a, yabụ anyị na-akpọ ndị na-anụ ụgbọ mmiri ka ha wee hụ ọhụụ nke ụgbọ ahụ site na ọkpọ mmiri a," Jan Swartz kwuru. "Ọ dịghị ụgbọ mmiri anyị ndị ọzọ enwetụla ụdị ihe ọhụụ a n'otu nkụji akọrọ, yabụ na akwụkwọ akụkọ anyị nke dị n'ịntanetị ga-enye echiche na-atọ ụtọ n'azụ-ele ọrụ ego achọrọ maka nnukwu ọrụ a.
Ihe eji enyere aka n’oge akpọnwụ akpọnwụ bụ akara aka nwaeze onye nọbu n’ụgbọ mmiri kachasị ọhụrụ, Princess Princess, Emerald Princess, na Ruby Princess. Emebatala ọtụtụ n'ime ha na Caribbean Princess, Star Princess, na Grand Princess n'oge oge ọkọchị.
Mgbe Golden Princess na-apụta site na drydock, ya atrium ga-Njirimara a ọhụrụ Piazza na-agba agba n'okporo ámá cafe featuring ejegharị ụtọ na abụọ ọhụrụ iri nhọrọ. Cafe International ga-enye kọfị pụrụ iche, kuki eghe eghe, achịcha dị iche iche, panini sandwiches, na tapas. Osisi vaịn, mmanya mmanya, ga-enye nhọrọ nke ihe karịrị mmanya 30 site na iko ahụ, gbakwunyere nhọrọ nri mmiri, anụ ọrụ aka na chiiz, yana ụlọ ahịa mmanya ebe ndị njem nwere ike ịzụta karama kachasị amasị ha.
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ newụ ọhụrụ, Crown Grill, ga-enye kichin mepere emepe ebe ndị njem nwere ike ịnụ ụtọ ikiri ka ndị siri nri na-akwadebe ibe, steaks, na nri mmiri, gụnyere lobsters dị ndụ.
Ndị njem toro eto na-achọ ịpụ na ya niile, ga-enwe ike zuru ike na ịdị jụụ nke Sanlọ Nsọ, ntinye aka nke Princess na-egosipụta oche oche ezumike na ọrụ nke Serenity Stewards. Ndị ọbịa na ebe a pụrụ iche nwere ike ịnụ ụtọ ihe ọ refụveraụ na-enye ume ọhụrụ na nri dị mfe ma ọ bụ nweta ịhịa aka n'ahụ na otu n'ime cabanas abụọ.
N’elu otu n’ime ọdọ mmiri ụgbọ mmiri a, Ihe nkiri N’okpuru Kpakpando ga-ebido n’elu mmiri nwere ngosipụta nke oge a na-akpọ Times Square-style LED, na-enye ihe nkiri mgbede na ọtụtụ mmemme ụbọchị. Ihe ngebichi 300-square-foot na-enye ndị njem ihe nkiri nkiri dị ka ebe nkiri ihe nkiri kachasị mma. Na mgbakwunye na sinima ezinụlọ na agba ọsọ nke mbụ, Ihe nkiri n'okpuru Kpakpando na-egosipụtakwa ihe omume egwuregwu, egwu, na mmemme mmemme ndị ọzọ - ihe ruru onyinye dị iche iche 50 kwa izu.
Dịka akụkụ nke mmeghari ohuru ahụ, Golden Princess ga-ejikwa windo windo ọhụrụ ọhụụ nwere windo onyonyo na-ekiri oke osimiri na cha cha chara achagharị na tebụl 7, na-eweta ya na mpaghara ntụrụndụ nke ụgbọ mmiri. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-agbakwunye ụlọ mbara ihu ọhụrụ 10 na ụlọ abụọ na-ele anya n'oké osimiri n'azụ ụgbọ mmiri ahụ, dochie ihe nkiri vidio mbụ. Mgbanwe ndị ọzọ gụnyere ọnọdụ ọhụrụ maka ụlọ egwuregwu, ụlọ ahịa ọhụrụ Limelight, njem ọhụụ ọhụụ na tebụl Captain's Circle, cafe Internetntanetị ọhụrụ na ọbá akwụkwọ, yana mgbakwunye mgbatị mgbatị ahụ na ebe mgbatị ahụ.